Antontan'isa amin'ny iPad | Vaovao IPhone
Ny vanim-potoana taorian'ny PC dia natambatra, amin'ny lafiny lehibe, amin'ny alàlan'ny iPad sy ny fandraisana azy lehibe teo amin'ireo mpampiasa. Tamin'ny Q4 2011, iPad 15,4 tapitrisa no efa namidy ary io no fitaovana safidin'ny mpampiasa maro izay tsy maintsy manatanteraka asa toy ny fandefasana mailaka na fitetezana Internet na koa lalao.
Tsy mampino fa ny fitaovana iray izay vao roa taona monja dia manana rindranasa 200.000 natao ho azy manokana ary nahavita ilay fifaninanana, mieritreritra ny hanana vokatra kalitao 100, dia tsy nahatratra ny iPad.
Sendra nahita ilay iPad vaovao izahay!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Antontan'isa amin'ny iPad
AppSlider: fidirana mivantana amin'ireo rindranasa roa avy amin'ny efijery fanidiana (Cydia)